Accueil > Gazetin'ny nosy > Lalana Ankorondrano : Vao mianatra asa ny Colas
Lalana Ankorondrano : Vao mianatra asa ny Colas
Taorian’ny fanamboarana ny fifamoivoizana amin’iny faritr’Antanimena iny dia nirosoana ny fanamboarana ny lalana etsy Ankorondrano, eo anoloan’ny tranom-barotra Fraise sy ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Tsy simba akory ka namboarina fa novaina ny fihaonan-dalana (rond point). Nohalehibeazina. Nisy fangitra vaovao koa natao tamin’ny lalana hizoran’ny fiara.
Tena mampikaikaika ny mpampiasa lalana eny ny fanaovana io fanavaozana io satria sady maharitra ela loatra ilay izy no hita fa mandrava efa. Asa na ny injeniera nampanao ny asa no vao miana-draharaha na ny vondrom-barotra Colas izay miantoka ny asa no tsy matotra manao zavatra fa tena mampijaly.
Miteraka fitohanan’ny fiara ilay izy. Asa, aorian’ny fahavitana fa ny sisin-dalana efa vita teo aloha tamin’izao fanamboarana izao mantsy, ohatra, dia noravaina indray. Ny avy amin’iny “Boulevard de l’Europe” iny dia mijaly vao tafavoaka eo. Toraka izany koa anefa indraindray ny midina avy any Antanimena manaraka iny tambohon’ny sekoly Esca iny.
Asa na iza koa no tena tompon’io tetik’asa io fa re hoe tsy ny ministeran’ny asa vaventy, tsy ny ministeran’ny fanajariana ny tany, tsy ny kaominin’
Antananarivo. Fa iza? Toa vahiny mpampiasa vola eto, angaha ?
Ka ny vola àry ve izany no malaina hivoaka any amin’ireo tompon’ny asa sa ny mpiantoka ny asa no tsy mahavoa fa vao mianatra asa ?
Ny azo antoka aloha dia tsy maintsy ho volabe no sandan’izy io. Tsaroana ihany mantsy ny vola notakian’ny Colas tamin’ny fanjakana tetezamita tamin’ny 2010. Nisy nihotsaka ny sisin’ny farihin’Anosy, mifanatrika amin’ny tranon’ny “Franco Malagasy”. 3.000 Tapitrisa na 3 miliara no nalain’ny Colas nanarenana izany. Raha orin’asa Malagasy anefa no nampanaovina an’iny na io etsy Ankorondrano io, azo antoka fa ny antsasaky ny sandany dia hahavitana manao azy.